Sida Loogu Isticmaalo Fiidiyow Suuqgeynta Ganacsigaaga Yaryar ee Guryaha | Martech Zone
Ma ogtahay muhiimadda ay leedahay suuqgeynta fiidiyowga ee joogitaanka khadka tooska ah ee shabakaddaada ganacsiga guryaha?
Macno malahan inaad tahay iibsade ama iibiye, waxaad u baahan tahay aqoonsi sumcad lagu kalsoon yahay oo sumcad leh si aad u soo jiito macaamiisha. Natiija ahaan, tartanka suuqgeynta guryaha ayaa ah mid aad u ba'an oo aadan si fudud ugu kobcin karin ganacsigaaga yar.
Nasiib wanaagse, suuqgeynta dhijitaalka ah waxay siisay ganacsiyada nooc kasta leh qaabab badan oo waxtar leh si loo kordhiyo wacyigooda astaanta. Suuqgeynta fiidiyowgu waa istiraatiijiyad muhiim u ah suuqgeynta dhijitaalka ah waxayna waxtar u leedahay dhammaan warshadaha, gaar ahaan guryaha.
Haddii aad rabto inaad barato qaar ka mid ah suuqgeynta fiidiyowga ee si fudud loo isticmaalo si kor loogu qaado ganacsigaaga yar yar ee guryaha, sii wad akhriska maqaalkan.
Go'aanso Yoolalkaaga Oo Qorshee Qorshe Sidaad Tahay
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato inaadan bilaabi karin sameynta fiidiyowyo la'aan ujeedooyin iyo qorshooyin toona. Suuqgeynta fiidiyowga waa hawl qiimo badan iyo waqti dhuuqis waxayna u baahan tahay istiraatiijiyad dhammaystiran oo sax ah.
Kahor intaadan bilaabin suuqgeynta fiidiyowga, waqti si aad u go'aamiso yoolalkaaga oo aad dejiso qorshe aad ku gaarto. Waxaad ubaahantahay inaad ogaato waxa saxda ah ee aad rabto inaad gaarto iyo goorta aad gaari karto natiijooyinka aad rabto.
Waa kuwan yoolalka caadiga ah ee aad tixgelin karto:
Tirada aragtida fiidiyowyadaada bishiiba
Si aad u fahamto xanaaqa macquulka ah ee kuwan, waxaad u baahan kartaa inaad sameyso raadinta tartanka si aad u ogaato natiijooyinka tartamayaashaada guryaha.
Markaad go'aamiso yoolalkaaga, waxaad dejin kartaa qorshe si waafaqsan. Isku day inaad dhisto istiraatiijiyad adag oo aad ku dheganaato. Dabcan, maadaama aad tahay qof bilow ah, waxaad u baahan kartaa xoogaa dib u eegis ah oo ku saabsan heerarka dhexe.
Meel mari Miisaaniyad macquul ah
Tallaabada xigta waa in la qiyaaso xaddiga lacagta aad u baahan tahay si aad u hirgeliso dhismahaaga ma guurtada ah istiraatiijiyadda suuqgeynta fiidiyowga.
Talaabadani waa lagama maarmaan si loo hubiyo tayada fiidiyowyadaada. Xusuusnow sameynta fiidiyowyada soo jiidashada leh waxay u baahan yihiin qalab badan, ka dibna, waa inaad meel iska dhigtaa miisaaniyad kugu filan.
Uma baahnid inaad niyad jabto haddii aadan awoodin miisaaniyad aad u tiro badan; waxaad ku bilaabi kartaa fiidiyowyo guriga lagu sameeyo iyo softiweer software tafatirka oo bilaash ah.
Isku day inaad barato talooyinka DIY ee sameynta fiidiyowyada si loo yareeyo kharashka. Waxaad si tartiib tartiib ah ugu aadi kartaa aaladaha mudnaanta leh iyo fiidiyowyo badan oo xirfad-yaqaan ah meheraddaada.
Qeex Nooc Qaas ah
Waxaa aad loogu talinayaa inaad yeelato qaab u gaar ah suuqgeyntaada dhijitaalka ah, gaar ahaan fiidiyowyadaada. Ahaanshaha joogtadan qaabkani wuxuu ka caawinayaa dhagaystayaashaada inay ku aqoonsadaan in yar ka dib.
Qaabkaaga, oo ay ku jiraan midabada, codka codka, nooca sheekada, iwm, ayaa matalaya astaamahaaga sumadda. Isku day inaad qeexdo wax qabow si aad u soo jiito dareenka dhagaystayaashaada. Xitaa waxaad kaheli kartaa jawaab celinta dhagaystayaashaada si aad ugujuujiso qaabkaaga fiidiyowga.
Waxaad sidoo kale qeexi kartaa mawduuca quudinta ee qoraaladaaga warbaahinta bulshada. Waxay ka dhigan tahay in marka booqdaha uu arko quudintaada, qoraalladu ay leeyihiin duluc guud. Tani waa hab wanaagsan oo lagu soo jiito dareenka dhagaystayaasha booqashadii ugu horreysay. Tusaale ahaan, waxaad ku arki kartaa mawduuca quudinta soo socota ee Instagram:
Sida aad u aragto, qoraalladu waxay wadaagaan qaab guud. Waad u habeyn kartaa mowduucyo kala duwan suuqgeynta fiidiyowga guryaha.
Aadaminimo Fiidiyoogaaga Guryaha
Waxaa la cadeeyay sida ugu saaxiibtinimada badan ee aad ula hadasho dhagaystayaashaada, heerarka kaqeybgalka sareeya ee aad hesho.
Tani waxay xitaa ka sii muhiimsan tahay markay tahay iibsiga iyo iibinta guryaha ama guryo. Guri haysashadu waa mid ka mid ah waaya-aragnimada shaqsiyadeed ee ugu wanaagsan ee ku lug leh shucuurta iyo dabeecadaha xiisaha leh.
Marka waxaad u baahan tahay inaad ku darto shucuurtan fiidiyowyadaada una sheeg sheekooyinkaaga adigoo tixgelinaya dhammaan dhibaatooyinka dhagaystayaashaada.
Tusaale ahaan, isku day inaad u damqato dhagaystayaasha la xiriira qiimaha sare iyo sicir bararka. Si fudud haddii loo dhigo, waa inaad dadnimo ku sameysaa fiidiyowyadaada guryaha si aad uga dhigto martida inay aaminaan inaad u fekereyso iyaga oo kale.
Xulo Xulashada Saxda ah ee Suuqgeynta Fiidiyowga
Waa inaad ogaataa in kanaal kasta oo dhijitaal ahi leeyahay dhagaystayaal u gaar ah, marka waa inaad ku wadaagtaa fiidiyowyadaada barnaamijyada ku habboon guryaha.
Tusaale ahaan, LinkedIn waa kanaal bulsheed oo ku wajahan shaqo helista, xirfadlayaal badan oo guryaha dhisana ay leeyihiin akoonno. Natiijo ahaan, way kuu fiicantahay inaad ku wadaagto fiidiyowyadaada barnaamijkan.
Nidaamyada warbaahinta bulshada ee ugu sarreeya sida Facebook, Instagram, iyo Twitter ayaa muhiim u ah suuqgeynta fiidiyowgaaga. Tusaale ahaan, Instagram wuxuu leeyahay astaamo badan oo waxtar u leh suuqgeynta fiidiyowga sida qoraallada quudinta, Sheekooyinka, Fiidiyowyada tooska ah, IGTV, iyo Reels. Waa inaad sida ugu fiican uga faa'iideysataa astaamahan si aad u hesho soo-gaadhista ugu badan ee suurtogalka ah.
Jadwal u samee fiidiyooyinkaaga guryaha
Fiidiyowyada ayaa mas'uul ka ah boqolkiiba tiro badan oo ah taraafikada bulshada. Qaar badan oo ka mid ah fiidiyowyadan waxaa abuuray noocyo, sidaas darteed waa muhiim inaad ka hor marto kuwa kula tartamaya.
Isticmaalayaasha waxaa ku qulqulaya qadar fara badan oo fiidiyowyo ah, fursaddaada in la ogaadona waa mid aad u yar. Hal dariiqo oo lagu kordhiyo muuqaalkaaga oo fiidiyowyadaada loo dhigo indhaha kuwa isticmaala badan waa jadwal.
Saacadaha ugu sareeya ee internetka ee ay dadka intiisa badani adeegsadaan barnaamijyada warbaahinta bulshada ayaa ku kala duwan madal iyo waliba warshado. Tusaale ahaan, waqtiga ugu fiican ee lagu dhajiyo barta Instagram-ka way ka duwan tahay Twitter.
Marka waxaad ka fiicnaan laheyd inaad adeegsato aaladaha jadwalka ee warbaahinta bulshada si aad ugu dhajiso waqtiga ugu fiican warshadahaaga oo aad uhesho heerarka kaqeybgalka sare ee fiidiyowyadaada.
Halkan waxaa ku yaal tusaale jadwalka oo la isticmaalayo Crowdfire:
Ka Faa'iideyso Awooda Tijaabada
Sumcadda sumcadda ayaa fure u ah dhiirigelinta himilooyinka si ay u noqdaan macaamiishaada. Qaab waxtar leh oo lagu sameeyo taas ayaa ah adoo u oggolaanaya macaamiisha hore inay ku hadlaan magacaaga. Markhaatifurka ayaa muhiim u ah ganacsiga yar sababtoo ah waxay keeneen kalsooni waxayna ka dhigayaan rajo cusub inay dareemaan raaxo.
Haddii macaamiishaadu noqdaan milkiileyaal guryo leh oo faraxsan, waxay u badan tahay inay si aad ah uga hadlaan magacaaga. Waxaad ubaahantahay inaad kudhex xirnaato iyaga xitaa dhiiragaliso ololahaaga markhaatiga. Isku day inaad geliso fiidiyowyadooda markhaatifurka boggaaga websaydhka si aad ugu ogeysiiso fikradahooda inay muhiim yihiin.
Waa kan tusaale markhaati wanaagsan oo ka socda Youtube:
Kordhi Dherarka Fiidiyowyadaada
Xitaa dhererka fiidiyowyadaadu waxay si aad ah saameyn ugu yeelan karaan ROI ee suuqgeynta fiidiyowga guryaha. Guud ahaan, dadka isticmaala bulshada waxay doorbidaan fiidiyowyo gaagaaban oo macaan. Taasi waa sababta astaamaha fiidiyowga gaaban sida Reels ama TikTok ay u kordhayaan.
Dabcan, dhererka fiidiyowga ee ugufiican wuxuu kuxiranyahay warshadahaaga iyo madal aad kuwadaageyso. Si aad ugu bilowdo, waxaad ka fiirsan kartaa fiidiyowyada 2-daqiiqo ah cabbirka fiidiyoowga ee ugu fiican.
Sidoo kale, waxaad u abuuri kartaa fiidiyowyo dhaadheer barnaamijyada sida Youtube iyo IGTV ka dibna waxaad la wadaagi kartaa noocyada gaagaaban ee fiidiyowyadaas barnaamijyada kale. Sidan, waxaad ku dhiirrigelin kartaa dhagaystayaashaada inay hubiyaan astaantaada meeraha kale.
Falanqee Waxqabadka Suuqgeynta Fiidiyowga
Maskaxda ku hay in istiraatiijiyad aan weligeed sii fiicnayn. Sida ganacsi yar oo dhisme ah oo bilaabmaya suuqgeynta fiidiyowga, waxaad u baahan kartaa inaad dib u eegis ku sameyso istiraatiijiyadaada munaasabad kasta.
Isku day inaad falanqeyso waxqabadkaaga oo aad hesho meelaha aad ku liidato iyo waxyaabaha aad ku fiicantahay. Markaad aqoonsato fiidiyowyada ugu fiican uguna waxqabadka xun, waxaad wanaajin kartaa fiidiyowyadaada mustaqbalka waxaadna heli kartaa ROI sare.
Waa kuwan tusaale ahaan qalabka falanqaynta ee Twitter:
Orod Tijaabada A / B
Si kasta oo aad ugu fiicantahay sameynta fiidiyowyada, waxaad u baahan tahay inaad ogaato nooca fiidiyowga, cinwaanka, ishtag, iyo waxyaabo kale oo badan oo soo jiita dhagaystayaashaada. Tijaabinta A / B waa hab waxtar leh oo lagu fahmo falcelinta dhagaystayaashaada ee ku aaddan waxyaabaha kala duwan ee ku jira qoraalada warbaahinta bulshada / websaydhka.
Tusaale ahaan, waxaad u beddeli kartaa hashtag-ga fiidiyoow gaar ah oo aad u diri kartaa labada noocba si aad ula socoto falcelinta taageerayaasha bulshada ee iyaga. Tan waxaa loo cadeeyay inay tahay wado wanaagsan oo lagu wanaajiyo qoraaladaada iyadoo loo eegayo danaha dhageystayaashaada.
Daah-: Martech Zone waxaa kujira xiriiriye xiriiriye Crowdfire.
Tags: imtixaanka absumcad sumadeedbuuq badanfiidiyowyada markhaatiga macaamiishamarkhaatiyada macaamiishahashtaghantida maguurtadasuuq geynta guryahamarkhaatiyada guryahafiidiyowga guryahavideo realtorfiidiyowyo markhaati ahfalanqaynta twitter-kacinwaan muuqaal ahdhererka fiidiyowgasuuqgeynta fiidiyowga
CrankWheel: Jadwalka Jadwalka iyo Soo Degsashada Iyadoo La Joojinayo Demo Deg Deg Ku-saleysan Browser